Yako Kuku S ** t Kambani Ichiri Kugamuchira Kukundikana? | Martech Zone
Husiku huno hwaive husiku hunoshamisa. Dzimwe shamwari neni takaenda kunoona Eric Davis ita chiratidziro chemurume-mumwe, Tsvuku Bastard, pa Indy Fringe yemitambo. Iyo showa inoshamisa, inokwezva vateereri uye zvobva zvaparadza zvishoma nezvishoma nhengo yega yega yevateereri imwe panguva.
Pane chimwe chikamu chechiratidziro, nhengo dzevateereri dzinobvunzwa kuti zviroto zvavo ndezvipi… zvichiteverwa nemibvunzo nezve izvo zvavanoita. Iye Red Bastard anobva anyengerera munhu kuti atore nhanho kuti abve pane izvo zvavari do uye ita nhanho yakananga kwavo rota. Sevamwe vanozviita, vateereri vanodanidzira, "Bastard". Sezvo vamwe vanowina uye vanzvenga nhanho, ivo vanonongedzerwa nevateereri uye vanodaidzwa kuti "Chicken S ** t". Mhedzisiro yacho hapana ipfupi nekushamisa. Wese munhu muvateereri anotya kuve kumagumo eRed Bastard inotevera tarisiro.
Izvi zvinei nechekuita neKushambadzira? Kupfuura zvaunofunga.
Iyi skrini yeimwe yakatarwa, yakajairika, inokwikwidza kiyi kiyi pa Google Insights:
Ndakasangana nekambani svondo rapfuura iro rebasa rebasa iri chaicho kiyi. Iyo kambani yanga ichishandisa mari yakawanda (inodarika $ 50k pane imwechete mushandirapamwe) mune zvetsika midhiya kubvira payakatanga. Mutengo wemishandirapamwe uyu wakaramba uchiwedzera nekufamba kwenguva uye mhedzisiro yave kudzikira. Ivo vava kutarisa kushambadzira pamhepo kuti vaone kana vachigona kumisa kubuda kweropa.
Pandakagara mubhoardroom, pakanga pasina kungotya chete mumba nekusvetukira mukati me online online, kwaive nekusatenda uye kusavimba. Iyi kambani yakanga isiri mukuramba chete, ivo vaitogamuchira kutadza. Vaya vaive patafura vachisundidzira kuenda kumberi (kusanganisira ini) vaitaridzika kutariswa se "Bastards". Kunyangwe iyo kambani ichinyatso kuziva kuti izvo zvavari kuita hazvisi kushanda, ivo vanoramba vachikakavara pamusoro pekutama online senzira.
Zvakandiyeuchidza nezvekuve muindasitiri yemapepanhau. Ndakaona sevamwe vevatungamiriri vane hungwaru muindasitiri yekushambadzira vakatarisa eBay neCraigslist vachikwidza kudenga vobva vakwenya misoro yavo vachishamisika kuti sei mari dzakarongwa dzichidonha.
Ini ndinonyatsoziva makambani anoita nekuda kwekutya uye nekuchenjerera vachimbundira tekinoroji nyowani, asi nekupihwa mafambiro evatengi mashandisirwo ekutsvaga uye enhau enhau se nzira dzekutanga yekutsvaga kwekutenga kwavo kunotevera… ungagone sei kubvunza zviri pachena? Ini handina basa nemakambani anombundira kutya - asi ini ndinoshamisika apo makambani anoenderera nekumbundira kutadza.
Kana tikarasikirwa nemukana wekufambisa kambani iyi kumberi, ndinogona kuyedzwa kusimuka ndovaudza zvavari chaizvo .. ”Huku S ** t!” Red Bastard yaizodada… kana kwete.
Cherechedza: Kukumbira ruregerero kana wagumburwa nemaasterisks ari pachena… zvese ndezvakanakisa. Ini zvakare handipikisane neyakajairwa midhiya - asi kunzwisisa mashandiro ehunhu maitiro ari online achichinja vatengi kuita sarudzo kwakakosha kugadzirisa yako midhiya mashandisiro. Mune ino kesi, zviri pachena kuti kufarira kwevatengi mumhinduro online kwakanyanya kuwedzera.
Tags: kukanganisaindy mupenderotsvuku bastard
RIP: Databases Dzako Dzese NdedzeMat
Jun 20, 2010 na9:05 AM
Danho rokutanga iroro ndiro rakanyanya kuoma. Zvakanyanya kuoma kubva pane zvinozivikanwa. Vanhu vazhinji vakasungwa nezvavanoziva. Ndinovimba kune iyo kambani inotaurwa ivo vanosarudza kutora kusvetuka. Chinyorwa chikuru.